ထိုင်းနိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လွှဲပြောင်းလာသည့် အမျိုးသမီး ၁၉ ဦး လူကုန်ကူးခံရခြင်း မရ?? - Yangon Media Group
တာချီလိတ်၊ မတ် ၂၄
ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) တာချီလိတ်မြို့ရှိ မြန်မာ-ထိုင်းအမှတ်(၂) ချစ်ကြည်ရေးတံတား၌ မတ် ၂၃ ရက်မွန်းလွဲပိုင်းက လွှဲ ပြောင်းလာသည့် အမျိုးသမီး ၁၉ ဦးသည် လူကုန်ကူးခံရခြင်းမရှိ ကြောင်း လူကုန်ကူးမှုတားဆီးနှိမ်နင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့မှသိရသည်။ ”အသက်(၁၈)နှစ်အောက် မိန်းကလေးတွေကိုလည်း မတွေ့ရပါဘူး။ ထိုင်းကတာဝန်ရှိသူကို မေးကြည့်တော့ သူတို့ကဘာအမှု မှဖွင့်လှစ်ထားခြင်းမရှိပါဘူးပြောတယ်။ သူတို့နည်းသူတို့ဟန်နဲ့ အလုပ်သွားလုပ်ရင်းနဲ့ ထိန်းသိမ်းခံရ ပြီး တရားမဝင် ဝင်ရောက်မှုနဲ့ တရားရုံးမှာ ဒဏ်ငွေဘတ် ၁ဝဝဝ ပေး ဆောင်ကာ ပြန်လည်လွှဲပြောင်းခြင်း ခံရတယ်” ဟုလူကုန်ကူးမှုတားဆီး နှိမ်နင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့စိတ် (၁) တာချီလိတ်မှ တပ်ဖွဲ့စိတ်မှူးရဲမှူးရင် ရင်အေးကပြောသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ လဝကမှူး Pol. Cap Katichai Sansil နှင့် တပ်ဖွဲ့ ဝင်များက တရားမဝင်မြန်မာအလုပ် သမားအမျိုးသမီး ၁၉ ဦး၊ အမျိုးသားသုံးဦး၊ စုစုပေါင်း ၂၂ ဦးတို့ကို လာရောက်လွှဲပြောင်းပေးအပ်ရာ မြန်မာဘက်မှ တာချီလိတ်မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးထွန်းဝင်းအောင်၊ နိုင်ငံခြားသားများတရားမဝင် ဝင်ရောက်မှုကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ မကဖ(၈)မှ တာဝန်ရှိသူများ၊ လူကုန်ကူးမှုတားဆီးနှိမ်နင်းရေးရဲ တပ်ဖွဲ့စိတ်(၁)တာချီလိတ်မှ တပ်ဖွဲ့ စိတ်မှူးရဲမှူးရင်ရင်အေးနှင့်တပ်ဖွဲ့ ဝင်များပါဝင်သောအဖွဲ့က လက်ခံ ယူခဲ့ပြီး မြန်မာ-ထိုင်းအမှတ်(၂)ချစ်ကြည်ရေးတံတား၌အခြေပြုပြီး ပူးပေါင်းအဖွဲ့ဖြင့် စစ်ဆေးခဲ့သည်။
”ကျွန်မတို့ကိုယ်တိုင် အလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်ရင်း ထိုင်းကတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ ဖမ်းဆီးခြင်းခံရတာပါ။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ကျွန်မတို့ကို လူ ကုန်ကူးခံရလို့ သူတို့ ကူညီထား တယ်လို့ ထိုင်းသတင်းတွေမှာ လွှင့်ခဲ့တာ အမှန်မဟုတ်ပါဘူး။ ထိုင်း တရားရုံးမှာ တရားမဝင် ဝင်ရောက်မှုနဲ့ ဒဏ်ငွေ ၁ဝဝဝ ပေးဆောင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံကို လွှဲပြောင်းပေးအပ် ခြင်းခံရတာပါ”ဟု ရွှေ့ပြောင်းမြန် မာမိန်းကလေးတစ်ဦးကပြောသည်။
အဆိုပါ တရားမဝင်ရွှေ့ပြောင်း မြန်မာအလုပ်သမားများတွင် ရှမ်း ပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)မှ မိန်းက လေးတစ်ဦးနှင့် ရှမ်းပြည်နယ် (အ ရှေ့ပိုင်း)မှ မိန်းကလေး ၁၈ ဦးတို့ ပါရှိပြီး ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက်မှ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်၊ မတ် ၂၃ ရက်ထိ လွှဲပြောင်းပေးအပ်သည့် မြန်မာအလုပ်သမားအမျိုးသား ၉၃၇၂ ဦး၊ အမျိုးသမီး ၃၆၉၁ ဦး၊ စုစုပေါင်း ၁၃ဝ၆၃ ဦးရှိကြောင်း လူကုန်ကူးမှု တားဆီးကာကွယ်ရေး အဖွဲ့မှ သိရသည်။
မိမိနိုင်ငံအတွက် ဂိုးအများဆုံး သွင်းနိုင်သူများတွင် စီရော်နယ်ဒို တတိယနေရာ ရောက်လာ
တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးကို ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရ အကောင်အထည် ဖော်ရာတွင် ကတိပေးထားသည့် ?
စင်ကာပူပြည်နှင်ဒဏ်ကြောင့် မြန်မာသို့ပြန်ရောက်လာပြီး ဖမ်းဆီးခံရသည့် ရခိုင်(စင်ကာပူ)အသင်း ဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင် ခြောက်ဦးကို ရုံးထုတ်၊ ချုပ်ရက်ထပ်ယူ
နယ်စပ်တွင် ကုန်သွယ်ရောင်းဝယ်ခြင်းအစား နယ်စပ်မှတစ်ဆင့် သယ်ယူပြီး ရန်ကုန်တွင် အရောင်းအဝယ်ြ?
လက်ပံတောင်းတောင် အရေး တင်ပြရန် ဒေသခံအချို့ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် နေအိမ်သို့ လာ